Shirkadda Golis Telecom oo daahfurtay Faricii 8aad ee Boosaaso | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis Telecom oo daahfurtay Faricii 8aad ee Boosaaso
Shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Somalia ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jartay faracii (Brunch) 8aad ee laga heli karo adeegga shirkadda kaas oo ku yaala hotelka Huruuse ee bartamaha magaalada Boosaaso.
Munaasbadda xariga looga jarayay qaybtan cusub ee ay shirkaddu furtay ayaa waxaa kasoo qayb galay masuuliyiinta sare ee shirkadda Golis Marti sharaf kala duwan iyo qaar kamid ah shacabka ku dhaqan xaafada laga hirgaliyay faracan oo u hamuun qabay inay helaan goob u dhaw oo ay ka helaan adeegga shirkadda.
Agaasimaha waaxda iibka adeegga shirkadda Golis Maxamuud Maxamed Axmed shirkadda oo xariga ka jaray faraca Huruuse ayaa sheegay in furitaanka Brunch-gan cusub ay ka dambaysay kadib markii la arkay baahida loo qabo islamarkaana loogu daneeyay dadka ka agdhaw xaafada laga furay faracan si ay helaan adeegyada shirkadda iyagoon aadin xarunta wayn ee shiradda.
Madaxa suuqgaynta shirkadda isgaarsiinta Golis C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) ayaa dhankiisa xusay in inta badan adeegyada shirkadda halkan laga heli doono kulana dardaarmay dadwaynaha inay si wanagsan uga faa’iidaystaan.
Wasiirkii hore ee dakadaha Puntland Ismaaciil Shire Buraale oo ka qayb galay munaasbaddan ayaa sheegay in si guud uga mahadcelinayo shirkadda adeegyada qaaliga ah ee ay shacabkeeda kula wadaagto si gaar ahna uu uga mahadcelinayo Golis, sida wanaagsan ee ay uga jawaabtay baahida shacabka ku dhaqan ka agdhaw Hotel Huruuse oo ay maanta uga furtay qayb cusub ay danohooda isgaarsiineed ka dhamaystaan.
Yaasin Cartan oo ahaa wasiirkii Maaliyada dawladda Jen Cade ayaa isaguna bogaadiyay furitaanka faracan isagoo shirkadda Golis kula dardaarmay inay sii wado talaabooyinka horumarineed ay mar walba la garab taagantahay bulshada ay ka dhex shaqayso.
Si kastaba ha ahaatee faracan cusub ee ay shirkadda Golis ka furtay maanta Hotel Horuuse ee Boosaaso ayaa looga kaaftoomi doonaa in dadka ku dhaqan xaafadaha ka agdhaw Hotel Huruuse ay aadaan xarunta wayn ee shirkadda iyagoo si fudud danohooda uga dhamaysan doona qaybtan cusub ee maanta shirkadda uga furtay guryohooda agtooda.